akanakisa ematehwe kesi yesamsung galaxy s8 uye s8 +
Kuru Nhau & Ongororo Akanakisa ematehwe makesi eSamsung Galaxy S8 uye S8 +
Akanakisa ematehwe makesi eSamsung Galaxy S8 uye S8 +
Kana iwe & apos; uri muridzi anodada weiyo Samsung Galaxy S8 kana Galaxy S8 +, uye iwe uchida kesi yekudzivirira inoyevedza yazvo, unofanirwa kufunga nezvekutora kesi yeganda. Nepo izvi zvinowanzo kuve zvinodhura kupfuura zvakajairwa kesi, ivo vanopa imwe elegance inogona kukoshesa iyo yepamusoro (er) mutengo.
Chokwadi chinhu, kesi yeganda haigone kupa apositi nhanho yekuchengetedza iyo, semuenzaniso, nyaya ine mutsindo inoita. Zvakadaro, muzviitiko zvakawanda zvezuva nezuva, yako Samsung Galaxy S8 ichave yakachengeteka uye inonzwika mukati mekomboti yeganda. Saka, kana iweitatinoda kutenga kesi yakadai, isu & apos; tine mazano pazasi - zvine mutsindo akanakisa eGirazi S8 makesi ematehwe parizvino ari pamusika, akanyorwa mune alfabheti.
FYY Wallet Nyaya dzeGPS S8
Tenga: Galaxy S8 (kubva $ 15.99) : Galaxy S8 + (kubva $ 15.99)
FYY Wallet Nyaya yeGalaxy S8
Kazhinji, chaiko makesi ematehwe anodhura anodarika $ 20, asi iyo FYY Wallet Nyaya dzeGPS S8 uye S8 + zvinosara pamutemo uyu. Inowanikwa pamitengo inotangira pamadhora 15.99 (zvinoenderana neruvara), aya makesi anotaridzika kunge akanaka, uye anoshanda, aine zvemukati TPU makomba, homwe dzemakadhi nemari, uye kickstand modhi. Zvakare, izvo zvine RFID-inodzivirira zvinhu kuchengetedza yako kadhi rechikwereti data kubva mukubiwa zvisina waya (zvisinei, kunyangwe nezvaungave wakanzwa, akawanda makadhi haana maRFID machipisi zvakadaro).
iCarer Flip Folio Nyaya yeGalaxy S8
Tenga: Galaxy S8 ($ 25.90) : Galaxy S8 + ($ 26.90)
Iyo yakatetepa uye inoyevedza Flip Folio Nyaya kubva kuIcare inodzivirira yako Galaxy S8 kana S8 + ine dash yemamwe maitiro. Iyo kesi inogadzirwa nemaoko kunze kweyechokwadi mhou yematehwe, iine yakawedzera dura remvura isina microfiber yeganda mukati. Inokodzera zvakakwana pamahwindo efoni, asi, zvinosuruvarisa, dhizaini iyi haina nzvimbo yehomwe dzemukati.
iPulse Flip Nyaya yeGalaxy S8
Tenga: Galaxy S8 (kubva $ 29.98) : Galaxy S8 + (kubva $ 29.98)
Yakagadzirwa nezviyo zvizere zveganda reItaly (pamwe neyakaonda asi yakaomarara yemukati TPU goko), iyo iPulse Flip Case ichanyatso kupa yako Samsung Galaxy S8 kana S8 + kutarisa kwemazambiringa. Iyo kesi inogona kushandurwa kuita kickstand, uye inopa mukati memakamuri emari nemakadhi (kusanganisira yekuona-kuburikidza nehomwe). Iyo & apos; inowanika mune mashoma anonakidza mavara musanganiswa, inouya aine 1-gore garandi.
Maxboost Wallet Nyaya yeGalaxy S8
Tenga: Galaxy S8 ($ 14.99) : Galaxy S8 + ($ 14.99)
Kudhura $ 14.99, iyo Maxboost Wallet Nyaya ndiyo inosarudzika sarudzo pane iyi chinyorwa. Iyo & apos; s zvakare ndiyo chete kesi iyo & apos; isina kunyatsogadzirwa kunze kweganda chairo, pachinzvimbo chekushandisa PU (aka bicast) dehwe - zvinoreva kuti rakakamurwa dehwe rakafukidzwa nechuru che polyurethane. Zvakadaro, iyo kesi inotaridzika kutonhorera. Iyo & apos; inowana akajairwa emukati mapocket emakadhi nemari, pamwe neka kickstand modhi, uye inouya newaranti yeupenyu.
Piel Frama Emporium Nyaya dzeGalaxy S8
Tenga: Galaxy S8 ($ 81.85) : Galaxy S8 + ($ 81.85)
Piel Frama ndiye mugadziri weEuropean wepamberi ematehwe ematehwe, uye premium zvirokwazvo izwi rinogona zvakare kutsanangura Samsung & apos; s Galaxy S8 mafoni. Imwe neimwe yePiel Frama Emporium kesi yeS8 uye S8 + yakaitwa nemaoko, nokudaro ichive yakasarudzika. Kutenda nekushandiswa kwemhando yepamusoro yemombe yeganda kunze, uye polypropylene mukati, makesi acho anonzwa kunge akakura, uye anokwana. Iko & apos; s mbiri-magineti yekuvhara system inoita basa rakakura kuchengetedza foni yako mukati (nekudaro yakachengetedzwa). Unogona kuodha maPiel Frama makesi eGlass S8 yako kana S8 + mune asingasviki gumi mavara, kubva murima kusvika kune toni toni.
apple wachi yakanyanya kutenga yakateedzana 2
Maitiro ekurodha pasi nekuisa iyo iOS 7 kugadzirisa kune yako iPhone, iPad kana iPod touch
Google Zvino vs Siri vs Cortana: showdown
iPad Pro 2018 vs iPad Pro 2017: tarisiro yekuti iyo nyowani iPads inofananidzwa kune gore rapfuura & apos; s mhando maererano nehukuru
Tora ese nyeredzi kodhi uye yekuzvishandira-pfupi makodhi eVerizon, AT&T, T-Mobile, uye Sprint mafoni pano!
Imwe, yakapetwa kana yakareba dhinda? Maitiro ekudzokorora iyo Galaxy S8 Bixby bhatani kuti uite chero chaunofarira
Kutanga mangwana, vanyori veMetroPCS vanozove nedziviriro kubva kune vanobiridzira
AT & T inova yekutanga huru yekutakura yeUS kugadzirisa iyo Galaxy Note 9 kune Android 10